Nan Khin May Win Archives - Tameelay
ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ယောင်္ကျားကို စဉ်းစားတာထက် စိတ်ဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ယောင်္ကျားကို ရွေးချယ်တာသူမှန်တယ်။ ထက်မြတ်သွက်လက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သူ့ထက်ညံ့ဖျင်းတဲ့ယောင်္ကျားကို ရွေးချယ်တာထက် သူ့ထက်အရည်အချင်းသာတဲ့ ယောင်္ကျားကိုရွေးချယ်တာသူမှန်တယ်။ ဝမ်းနည်းအားငယ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ကိုဥပေက္ခာပြုတဲ့ယောင်္ကျားကို ရွေးချယ်တာထက် သူ့ကိုတန်ဖိုးထားမူနဲ့ မြတ်နိုးတတ်တဲ့ယောင်္ကျားကိုရွေးချယ်တာသူမှန်တယ်။ ချို့တဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် နွမ်းပါးပြီးလက်ကြောမတင်းတဲ့ယောင်္ကျားကိုရွေးချယ်တာထက် ကြိုးစားမှုနဲ့ တင့်တောင်းတင့်တယ်ထားနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားကိုရွေးချယ်တာသူမှန်တယ်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောင်္ကျားကို ရွေးချယ်တာထက်မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ယောင်္ကျားကိုရွေးချယ်တာသူမှန်တယ်။ မိန်းမသားတွေရဲ့ဘဝမှာ အချစ်ဆိုတာဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပါဝင်ပေမယ့်ဘဝတစ်ခုကိုနှစ်ယောက်အတူထူထာင်ကြပြီဆိုရင် ရာထူးဂုဏ်ရှိန်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေထက်ကိုယ့်အပေါ်မြတ်နိုးယုယကြင်နာပြီးကိုယ့်ဘဝကို လုံခြုံမူအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုသာ ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမှာပါ။ မိန်းကလေးတိုင်း အလိမ္မာနဲ့အသိဉာဏ်ယှဉ်တွဲလို့ဆင်ခြင်တွတ်ချက်သုံးသပ်ပြီးမှ ဘဝအတွတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်။ Nan Khin May Win ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ ရပ္တည္ေနနိုင္တဲ႕မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပစၥည္းဥစၥာျပည့္စံုတဲ့​ေယာက်ၤားကို စဥ္းစားတာထက္ စိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝတဲ့​ေယာက်ၤားကို ေရြးခ်ယ္တာသူမွန္တယ္။ ထက္ျမတ္သြက္လက္​​တဲ႕ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သူ႕ထက္ညံ႕ဖ်င္းတဲ့​ေယာက်ၤားကို ေရြးခ်ယ္တာထက္ သူ႕ထက္အရည္အခ်င္းသာတဲ႕ ေယာက်ၤားကို​ေရြးခ်ယ္တာသူမွန္တယ္။ ဝမ္းနည္း​အားငယ္တတ္တဲ႕မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ သူ႕ကိုဥေပကၡာျပဳတဲ့​ေယာက်ၤားကို ေရြးခ်ယ္တာထက္ သူ႕ကိုတန္​ဖိုးထားမူနဲ႔ ျမတ္နိုး​တတ္တဲ႔ေယာက်ၤားကိုေရြးခ်ယ္တာသူမွန္တယ္။ ခ်ိဳ႕တဲ့ဆင္းရဲတဲ႕မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ႏြမ္းပါးျပီးလက္ေၾကာမတင္းတဲ႕ေယာက်ၤားကို​ေရြးခ်ယ္တာထက္ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 03, Nan Khin May Win
ကျွန်မကပြတ်သားတယ် ကျွန်မလား…? ကိုယ့်အပေါ်တန်ဖိုးမထားသူကိုဘယ်တော့မှဖက်တွယ်မနေဘူး။ သံယောဇဉ်မရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ သူကအတုအယောင်ဆိုကိုယ်ကအပေါ်ယံပဲ။ ကိုယ့်အပေါ်ဥပေက္ခာပြုထားသူကိုဘယ်တော့မှခယမနေဘူး။ဂရုမစိုက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ သူကခပ်ချေချေဆိုရင်ကိုယ်ကခပ်တင်းတင်းပဲ။ ကိုယ်ကိုထားရစ်ခဲ့သူကိုဘယ်တော့မှပြန်လာစေဖို့မဆွဲဆောင်ဘူး။ သူကခပ်ရှင်းရှင်းဆိုကိုယ်ကခပ်ကင်းကင်းပဲ။ ကျွန်မရဲ့ခံယူချက်လား…? ရှင်းပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားသူအတွတ်အကောင်းဆုံးတွေပေးဆပ်ဖို့ဝန်မလေးသလို ကိုယ့်အပေါ်တန်ဖိုးမထားသူကိုတော့ကျောခိုင်းပြစ်ဖို့ဝန်မလေးတတ်ဘူး။ သူက”တာ့တာ”ဆိုရင်ကိုယ်က”ဘိုင့်ဘိုင်”ပဲပေါ့။ Nan Khin May Win ကြၽန္​မကျပတ္​သားတယ္ ကြၽန္​မလား…? ကိုယ္​့အ​ေပၚတန္​ဖိုးမထားသူကိုဘယ္​​ေတာ့မွဖက္​တြယ္​မ​ေနဘူး။ သံ​ေယာဇဥ္​မ႐ွိလို႔​​ေတာ့မဟုတ္​ဘူး။ သူကအတုအ​ေယာင္​ဆိုကိုယ္​ကအ​ေပၚယံပဲ။ ကိုယ္​့အ​ေပၚဥ​ေပကၡာျပဳထားသူက္​ုိဘယ္​​ေတာ့မွခယမ​ေနဘူး။ဂ႐ုမစိုက္​ခ်င္​လို႔မဟုတ္​ဘူး။ သူကခပ္​​ေခ်​ေခ်ဆ္​ုိရင္​ကိုယ္​ကခပ္​တင္​းတင္​းပဲ။ ကိုယ္​ကိုထားရစ္​ခဲ့သူကိုဘယ္​​ေတာ့မွျပန္​လာ​ေစဖို႔မဆြဲ​ေဆာင္​ဘူး။ သူကခပ္​႐ွင္​း႐ွင္​းဆိုကိုယ္​ကခပ္​ကင္​းကင္​းပဲ။ ကြၽန္​မရဲ႕ခံယူခ်က္​လား…? ႐ွင္​းပါတယ္​။ကိုယ္​့ရဲ႕အခ်စ္​ကိုတန္​ဖိုးထားသူအတြတ္​အ​ေကာင္​းဆံုး​ေတြ​ေပးဆပ္​ဖို႔ဝန္​မ​ေလးသလို ကိုယ္​့အ​ေပၚတန္​ဖိုးမထားသူကို​ေတာ့​ေက်ာခိုင္​းျပစ္​ဖို႔ဝန္​မ​ေလးတတ္​ဘူး။ သူက”တာ့တာ”ဆိုရင္​ကိုယ္​က”ဘ္​ုိင္​့ဘိုင္​”ပဲ​ေပါ့။ Nan Khin May Win
Categories Tameelay Knowledge Tags 02, Nan Khin May Win
ကျွန်မ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို ရောင်းစားပြီးမှရလာမယ့် ချမ်းသာခြင်းမျိုးကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး
June 10, 2020 by daddy
ရှင်သန်မူ ကျွန်မ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို ရောင်းစားပြီးမှရလာမယ့် ချမ်းသာခြင်းမျိုးကိုလည်းမလိုချင်ပါဘူး။ သူတစ်ပါးဆီက နိူက်ချူပြီးမှရလာမယ့် အဆင်ပြေခြင်းမျိုးကိုလည်း ရွံမုန်းပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ခုတုံးလုပ်အသုံးချပြီးမှ ရလာမယ့်အောင်မြင်မူမျိုူးကိုလည်း လိပ်ပြာမသန့်ပါဘူး၊။ သူတစ်ပါးအပေါ် မသမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရလာမယ့် အနိုင်ရခြင်းမျိုးကိုလည်း လက်မခံနိင်ပါဘူး။ ကျွန်မလား…? အချမ်းသာဆုံးမဖြစ်ရင်နေပါစေ… အကောင်းမွန်ဆုံးဆိုတာတွေလည်းမရရင်နေပါစေ … ဘဝမှာ သိက္ခာရှိရှိ,လိပ်ပြာလုံလုံနဲ့ အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမျိုးရရှိဖို့ပဲလိုလားခဲ့ပါတယ်။ Nan Khin May Win ရွင္သန္​​မူ ကြၽန္​မ ကိုယ္​့ရဲ႕ကိုယ္​က်င္​့တရားကို ​ေရာင္​းစားၿပီးမွရလာမယ္​့ ခ်မ္​းသာျခင္​းမ်ိဳးကိုလည္​းမလိုခ်င္ပါဘူး​။ သူတစ္​ပါးဆီက ႏိူက္​ခ်ဴၿပီးမွရလာမယ္​့ အဆင္​​ေျပျခင္​းမ်ိဳးကိုလည္​း ရြံမုန္​းပါတယ္​။ သူတစ္​ပါးကို ခုတံုးလုပ္​အသံုးခ်ၿပီးမွ ရလာမယ္​့​ေအာင္​ျမင္​မူမ်ိဳူးကိုလည္​း လိပ္ျ​​ပာမသန္​႔ပါဘူး၊။ သူတစ္​ပါးအ​ေပၚ မသမာတဲ့နည္​းလမ္​းနဲ႔ရလာမယ္​့ ​အႏိုင္​ရျခင္​းမ်ိဳးကိုလည္​း လက္မခံန္ိင္​ပါဘူး။ ကြၽန္​မလား…? အခ်မ္​းသာဆံုး​မျဖစ္​ရင္​​ေနပါ​ေစ… အ​ေကာင္း​မြန္​ဆံုး​ဆိုတာ​ေတြလည္း​မရရင္​​ေနပါ​ေစ … ဘဝမွာ ​သိကၡာ႐ွိ႐ွိ,လိပ္​ျပာလံုလံုနဲ႔ ​ေအးခ်မ္​း​ေပ်ာ္​ရႊင္​တဲ့ဘဝမ်ိဳးရ႐ွိဖို႔ပဲလိုလားခဲ့ပါတယ္​။ Nan Khin May … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 10, Nan Khin May Win
“ယောကျာ်းကောင်းဆိုတာ ” ဦးနှောက်ရှိပြီးတန်းဖိုးကြီးတဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာဘယ်တော့မှ.မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူတကယ်မချစ်ပဲ အပျော်မကြံဘူး။ ဖြစ်ပြီးသွားရင်လည်းတာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တီအပြည့်ရှိတယ်။ တစ်ချိ့ယောကျ်ားတွေကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတစ်နပ်စားဉာဏ်နဲ့ကြံစည်ပြီးမှဖုတ်ဖက်ခါထထွက်လို့ “ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ရင်းပြီးမချစ်ပါနဲ့” “ဆုံဆည်းခွင့်ရှိသလောက်ပဲကြေနပ်ပါ”ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့သုံးပြီးစွန့်ခွာတတ်ကြတယ်။ ကိုယ်ကတာဝန်မယူရဲ,တာဝန်မခံရဲပဲနဲ့တော့မိန်းမသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုမဖျက်ဆီးသင့်ဘူး။ ကိုယ်သာယောကျ်ားကောင်းဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယုံမှတ်လို့ပုံအပ်မိတဲ့မိနိးမတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတာဝန်ယူမူ,တာဝန်ခံမူတွေရှိသင့်တယ်။ သူ့နေရာမှာကိုယ့်နှစ်မ,ကိုယ့်အစ်မသာဆိုတဲ့ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်သာရှိခဲ့ရင်ဒီလိုစကားလုံးမျိုးကိုလွယ်လွယ်သုံးနိုင်မလားဆိုတာတွေးကြည့်သင့်တယ်။ ယောကျာ်းကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာလက်မထပ်နိုင်သေးတဲ့ ချစ်သူရည်းစားအပေါ်ဘယ်တော့မှအခွင့်ရေးယူတတ်ပြီးတစ်နပ်စားဉာဏ်နဲ့ မကြံဘူး။ ပြောပြီးသား စကား၊ပေးပြီးသား ကတိကိုအသက်ထက်တန်းဖိုးထားတတ်တဲ့ယောကျ်ားဆိုတာ ဆန္ဒကို သိက္ခာ၊ နဲ့ထိန်းလို့ဘဝကို အတွေးအခေါ်နဲ့ထိန်းတတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလှပအောင်ဖန်တီးရေးဆွဲတတ်ကြတယ်။ ယောကျာ်းလေးမှ မဟုတ်ပါဘူး…..လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ကျင့်တရားပျတ်စီးခြင်းအခြေခံကြောင်းကတော့ သူတစ်ပါးပစ္စည်း အချောင်လိုချင်တာ…. လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲ အခွင့်အရေးလိုလားတာ…. ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိတာ…. လုပ်ရပ်တိုင်းကို တာဝန်မယူနိုင်တာ…. နှုတ်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိတာဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားပျတ်စီးခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေပါပဲ။ လူဆိုတာ ဘယ်လောက်ပဲပညာတတ်တတ်၊ငွေကြေးဘယ်ဘောက်ပဲရှိရှိ၊အာဏရာထူးတွေဘယ်လောက်ပဲ ကြီးမာနေပါစေ… ကိုယ့်ကျင့်တရားမရှိရင်လူယုတ်မာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ သစ္စာရှိပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့ ယောကျာ်းကောင်းဆိုတာ ရုပ်ချောတာ ရုပ်ဆိုးတာနဲ့မဆိုင်သလိုဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာနဲ့လည်း မဆိုင်ပါဘူး… အကျင့်စာရိတ္တပိုင်နဲ့သာသက်ဆိုင်သွားတာပါ။ ( တချို့တချို့သောယောင်္ကျားယုတ်များ….သို့ ) Nan Khin May Win “ေယာက်ာ္း​ေကာင္​းဆိုတာ … Read more